IDEPA YAKHO ECARMEN - I-Airbnb
IDEPA YAKHO ECARMEN
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNelly
Indawo yokuhlala ibekwe kakuhle, iibhloko ezintathu ukusuka kumjikelo weCamarón, indawo yeyunivesithi kunye nendawo yesibhedlele, unokuhamba uye kwiindawo ezahlukeneyo ukuze utye nantoni na oyifunayo: ukutya kwaselwandle, inyama, ukutya kwaseMexico, ipizza, njl. Ifakwe kwiibhloko ezisibhozo ukusuka kwitheminali ye-ADO. Ayinayo indawo yokupaka.
Yindawo eyenzelwe ukuphumla, ukucoceka kunye nokuzola. Igumbi lokulala linemozulu, idesika yeTV kunye nendawo yokuxhoma iimpahla. Ikhitshi linesikhenkcisi, imicrowave, umenzi wekofu kunye negrill yombane kunye necrockery kunye ne-cutlery.
4.92 · Izimvo eziyi-140
Yindawo ezolileyo neqhelekileyo, abanye abamelwane bade bathande ukuphola emva kwemini ngaphandle kwendlu yabo. Ngokuchaseneyo kukho indawo yokuzivocavoca kunye neemitha ezingama-30 ukusuka kwicawa encinci.
Kwisitrato esifanayo kukho indawo yokubhaka kunye nevenkile yokutyela encinci.
Nangona singahlali kuloo mmandla, ukuba sikufuphi ukulungisa nayiphi na imeko esenokuvela, siya ngefowuni okanye nantoni na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ciudad del Carmen